Ithegi: thengisa kwi-Intanethi | Martech Zone
Ithegi: thengisa kwi-Intanethi
Ufanele njani ukuba uthengise kwi-Intanethi
NgoMvulo, nge-14 kaJanuwari, 2013 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 U-Andrew Davis
Ukukhetha apho uza kuthengisa khona izinto zakho kwi-Intanethi kunokuba kufana nokuthenga imoto yakho yokuqala. Into oyikhethayo ixhomekeke kwinto oyifunayo, kwaye uluhlu lwezinto onokuzikhetha lunokuba nzima. Iindawo zorhwebo ezentlalo zibonelela ngethuba lokungena kuthungelwano olubanzi kakhulu lwabathengi kodwa bathabatha inzuzo enkulu. Ukuba unqwenela ukuthengisa ngokukhawuleza kwaye ungakhathazeki malunga nemida, banokubheja kwakho.
Ukuthenga indlela yokuziphatha kutshintshile, iiNkampani azikatshintshi
NgoMgqibelo, uJanuwari 23, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha senza izinto kuba yindlela esele yenziwe ngayo. Akukho mntu ukhumbulayo ukuba kutheni kanye kanye, kodwa siqhubeka sikwenza… nokuba kuyasikhathaza. Xa ndijonga ukuthengisa okuqhelekileyo kunye nolawulo oluphezulu lweenkampani zale mihla, ulwakhiwo alukatshintshi ukusukela oko abantu abathengisayo betyhala ipavumente kwaye betsalela iidola. Kwiinkampani ezininzi endikhe ndazindwendwela, uninzi "lweentengiso" lwenzeka kwicala lokuthengisa eludongeni. Ukuthengisa kuthatha nje
Umbhali-mbhali uBob Bly unikezele uluhlu lwezizathu zokuba kutheni ukuthengisa kumashishini kwahluke kakhulu kubathengi. Ndibhalile malunga neenjongo kwizithuba zangaphambili, kwaye ndiyakholelwa ukuba lo ngumzekelo omhle. Injongo yomthengi weshishini yahlukile xa kuthelekiswa nabathengi: Umthengi weshishini ufuna ukuthenga. Umthengi weshishini uphucukile. Umthengi weshishini uza kufunda ikopi eninzi. Inkqubo yokuthenga kwamanyathelo amaninzi. Iimpembelelo ezininzi zokuthenga. Iimveliso zeshishini zezi